စစ်ကိုင်း ကောင်းမှုတော်စေတီကို သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဦးဆောင်၍ ထုံးသင်္ကန်း ပြန်လည်ကပ်လှူမည် - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း ကောင်းမှုတော်စေတီကို သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဦးဆောင်၍ ထုံးသင်္ကန်း ပြန်လည်ကပ်လှူမည်
စစ်ကိုင်း၊ အောက်တိုဘာ ၁
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းမြို့၏ ဂုဏ်ဆောင်ရာဇမုနိစူဠာကောင်း မှုစေတီတော်ကြီးအား အများပြည်သူဆန္ဒအရ မူလလက်ရာထုံးသင်္ကန်း ပြန်လည်ကပ်လှူပူဇော်ရန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ သ ဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးဖြစ်၍ အမြန်ဆုံးလုပ်ငန်းစတင်အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ကောင်းမှုတော် စေတီ တော်ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မျိုးလွင်က ပြောကြားသည်။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက ကောင်းမှုတော်စေတီ တော်ကို ရွှေရောင်ဆေးဖြင့် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ခဲ့ရာ ထိုစဉ်က အများပြည်သူဆန္ဒမပါဝင်ဘဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် စစ်ကိုင်းမြို့ခံ အများစုနှင့်ရပ်နီးရပ်ဝေးဘုရားဖူး လာသူများကလည်း စေတီတော် ကြီး၏သပ္ပာယ်မှုမှာ ရွှေရောင်ထက် မူလလက်ရာဖြစ်သည့် အဖြူရောင် ထုံးသင်္ကန်းကသာ ကြည်ညိုဖွယ် ရာပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း ခံစား ကြရသည်။
”စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအ စိုးရအဖွဲ့က ထုံးသင်္ကန်းကပ်လှူရာမှာ ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီတွေရယူပြီးမှ ဆောင်ရွက်ပါဆိုတဲ့အ ကြံပြုချက်နဲ့ ထုံးသုတ်ဖို့သဘောတူ ခွင့်ပြုကြောင်းစာနဲ့အကြောင်းကြားပါတယ်။ ဒီနေ့နံနက်မှာပဲ ကျွန် တော်ဦးဆောင်တဲ့ဂေါပကအဖွဲ့ ဝင်တွေ သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့ သြဝါဒခံယူပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးက ငါလည်း အခုသက်တော် ၈၂ ရှိပြီ။ ထုံးသင်္ကန်းပြန်လည်ကပ်လှူရာမှာ ဆွစ်ဇာလန်က ပညာရှင်တွေကလည်း ပါဝင်ကူညီပါ့မယ်လို့ ငါ့ဆီကို ကမ်းလှမ်းထားတာရှိတယ်။ ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ သက်တော်ကြီးပြီဖြစ်လို့ လုပ်ငန်းအမြန်ဆုံးစတင်ဆောင်ရွက်နိုင် အောင်လုပ်မယ်”ဟု ဂေါပကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မျိုးလွင်က ပြောသည်။
အဆိုပါစေတီတော်ကြီးအား အဖြူရောင်ထုံးသင်္ကန်းဖြင့် ပြန်လည်မြင်တွေ့လိုသူများက မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့၏သြဝါဒခံယူ ခြင်း၊ ဆန္ဒပြုနိုင်ရန် Signature Campain လက်မှတ်ရေးထိုးကြ ခြင်းများအပြင် စေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့သစ်ကလည်း သီတဂူဆရာ တော်ကြီးအပါအဝင် ဆရာတော ကြီးများထံ လျှောက်ထားတင်ပြ ကြကာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြခဲ့ကြရာမှ ယခုကဲ့သို့ ထုံးသင်္ကန်းပြန်လည်ကပ်လှူ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် မိုင်းလားဈေးကွက်နှင့် နီးစပ်သည့် တာချီလိတ်နှင့် ကျိုင်းတုံမြို့တို့တ?
''အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုပြီး မလာကြတာ?
မန္တလေးမြို့၏ ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ တည်ဆောက်မှု ရာခိုင်နှုန်းပြည်?
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရာဇဂြိုဟ်ရေလှောင်တမံ ဘက်စုံစီမံကိန်??
ရခိုင်လူထုအနေဖြင့် တပ်မတော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ကူညီပူးပေါင်းနိုင်ရေး တိုက်တွန်းသည့်??